Banyere Anyị - Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Ltd.
RuiYi bụ ọkachamara soplaya na emeputa nke aluminum alloy efere na China na anyị na-arụkọ ọrụ na ama factory nke aluminum na-agbalị saftify anyị ahịa si dị iche iche ubi.Anyị factory e tọrọ ntọala na 1997, ugbu a ụlọ ọrụ nwere a ngụkọta ọrụ nke n'elu 4000 , gụnyere ihe karịrị 300 ọkachamara oru mkpara.
Onye nrụpụta, onye nnọchi anya, onye mbupụ, ụlọ ọrụ azụmaahịa, onye na-ere ere
Nọmba nke ndị ọrụ
North America, South America, Western Europe, Eastern Europe, Eastern Asia, Southeast Asia, Middle East, Africa, Oceania, n'ụwa nile.
Ka ọ bụrụ ihe ngwọta otu nkwụsị kacha mma maka ịnyefe ọla aluminom na China.
Anyị na-agba mbọ ịnye ngwaahịa Aluminom nke ụwa.Ọ dịghị ihe dị anyị mkpa karịa afọ ojuju gị zuru oke na ọrụ na ngwaahịa anyị nwere àgwà pụrụiche, uto na-aga n'ihu, ohere na mmekọrịta bara uru.
Xiaoxian RuiYi Commercial Trade Co., Limited e-elekwasị anya na top àgwà aluminum alloy ihe karịrị 10 afọ na China.Anyị malitere dị ka obere ọrụ, ma ugbu a aghọwo otu n'ime ndị na-ebute ụzọ na ụlọ ọrụ aluminum na China.
Họrọ nnukwu isi uru anyị
Nnukwu ngwa ahịa iji hụ na ịdị mma
Site n'usoro etinyere na mbupu ọpụpụ, a na-eme nyocha dị mma atọ iji hụ na ọnụ ọgụgụ ruru eru nke ngwaahịa emechara karịrị 100%.Anyị nwere nnukwu ngwa ahịa, anyị nwere ike ịnye ndị ahịa ihe zuru oke ka ndị ahịa ghara ichegbu onwe ha banyere nsogbu nke enweghị ngwaahịa na ụkọ ngwaahịa.
Nbufe n'oge yana ichekwa ọnụ ahịa
Anyị na-ekwe nkwa na mgbe onye ahịa nyechara iwu, a ga-ebufe ngwaahịa ntụpọ n'otu ụbọchị ahụ.Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Ltd. ji ezi obi na-enye ngwaahịa dị elu maka ndị ahịa ụlọ na ndị mba ọzọ, ma na-enye ndị ahịa ngwaahịa na-eju afọ.
Ahụmịhe ọrụ egosipụtara
Anyị na-ekwe nkwa na ụlọ ọrụ anyị ga-agbaso usoro ọ bụla n'oge iji hụ na ndị ahịa nwere ike ịnweta ngwaahịa ahụ n'enweghị nsogbu, gee ntị n'echiche na aro ha mgbe niile, na-atụgharị uche na nsogbu nke anyị.Ka ndị ahịa nwee ahụ iru ala.
Aluminom Alloys na-edobe ngwaahịa dị elu n'oge usoro nrụpụta niile.Site na nnyefe nke ingot na ájá ruo na nlele nke ikpeazụ, a na-enye nlebara anya dị ukwuu na ngwaahịa niile dị ka e depụtara site na nhazi nhazi maka ihe nkedo ọ bụla chọrọ.
Akụrụngwa dị mma gụnyere mass spectrometry maka nyocha igwe, SPC nke njikwa ájá, nnwale anụ ahụ, agba agba, x-ray, nnwale nrụgide na nlele eletrọnịkị.Sistemụ ndekọ dị ukwuu na-achịkọta data maka nchọta zuru oke.Mmemme njikwa mmepụta kọmputa nke steeti nka na-enye mmelite ọkwa mmepụta kwa ụbọchị na-enye ohere ka a na-ebuga oge na-agbanwe agbanwe.
Aluminom Alloys na-aga n'ihu nraranye ya na ịdị mma site na mmemme na-aga n'ihu nke ụlọ ọrụ na nhazi usoro iji gboo mkpa ndị ahịa n'ọdịnihu, karịsịa na ngwa siri ike.